अफगानिस्तानमा ९५० तालिबान मारिए, ५०० घाइते - Sutra News
आइतवार, श्रावण १० गते २०७८
# एमालेमा तेस्रो धारको जन्म
काबुल- अफगानिस्तानमा भएको सुरक्षा कारबाहीमा परी कम्तीमा ९५० भन्दा बढी तालिबान लडाकूहरु मारिएका छन् । घटनाका कारण अरु पाँच सय भन्दा बढी घाइते भएका सरकारी अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । यो विवरण पछिल्लो चार दिनको भएको बताइएको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरु र तालिबान लडाकूहरुका बीचमा देशका २० भन्दा बढी प्रान्त र सहरमा भिडन्त तथा हिंसात्मक घटना भएको जनाइएको छ । लडाकू समुहले लगातार हिंसात्मक गतिविधिहरु गरिरहेकाले सुरक्षा कारबाही गर्नु परेको सुरक्षा अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कतिपय सहर तथा क्षेत्रहरु तालिबान लडाकूहरुको नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरिएको छ । ती मध्ये सोर्ख ए पर्सा जिल्लाको पर्वाना र माइलस्तान जिल्लाको घाज्नीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा लिइएको जनाएका छन् । तर चाखान्सुर जिल्लाको मिर्मोजलाइ भने लडाकूहरुले फेरि कब्जा गरेको समाचार श्रोतले जनाएको छ ।
अफगानिस्तानको उत्तरपूर्वी प्रान्त ताखारमा पनि सुरक्षाकर्मी र तालिबान लडाकूहरुका बीचमा ठूलो भिडन्त भएको थियो । तालिबान लडाकूहरुको नियन्त्रणमा रहेका ठाउँहरुलाई नियन्त्रणमुक्त गर्न सरकारी सुरक्षाकर्मीहरुले प्रयास गरिरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
प्रकाशित :श्रावण ४, २०७८ सोमवार - १८:४१:४६
गठबन्धनको बैठकमा फेरि सामेल भए माधव नेपाल, ओलीसँग झनै टाढिए ?
सीमा समस्या कूटनीतिक तरिकाबाट समाधान गरिनुपर्छः मुख्यमन्त्री भट्ट
एमालेको रक्षा गर्ने खम्बा हो युथफोर्सः ईश्वर पोखरेल
काबुलमा हवाई आक्रमणमा परी ३० को मृत्यु, १७ घाइते
कोरोनाको खोप लगाउनेलाई गाँजा र बियर उपहार !
अश्लील सामग्री काण्डमा मुछिएका भारतीय अर्बपति राज कुन्द्रालाई ७ वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने
लेबनानमा ४० लाखभन्दा बढी मानिसमा पिउने पानीको अभाव: युनिसेफ
माओवादी केन्द्रमै फर्किने मूडमा बादल र भट्ट !
'जसरी पनि मन्त्री चाहिन्छ' भन्दै प्रचण्डलाई तनाव दिनेहरू को को हुन् ?
रक्सी पिएपछि मान्छे किन अंग्रेजी बोल्छन् ? यस्तो छ कारण
माओवादीका ४९ सांसद सबैले मन्त्री चाहिन्छ भनेपछि प्रचण्ड तनावमा, पोखे यस्तो दुख